🥇 ▷ Yahoo Mail waxay hagaajinaysaa qaabeynkeeda si ay u qarinto Gmail ✅
Yahoo Mail waxay hagaajinaysaa qaabeynkeeda si ay u qarinto Gmail
Laga yaabee ka hadlida emaylka mobilada inay maskaxda ku soo qaaddo magaca Gmail, laakiin waxaa jira codsiyo badan oo ku habboon maaree emailkeena. Xitaa waxaa jira adeegyo ka horeeya Gmail, sida kiiska Yahoo Mail. Weligaa ma isticmaalin barnaamijkan? Hagaag, hadda si fiican ayaa loogu cusboonaysiiyay qaabeynta. Oo waliba ku haboon xisaabaadka Gmail…
Habka mugdiga ah ee Gmail ayaa horey u heli kara dadka isticmaala qaarkood Nidaamka mugdiga ah ee la filayo ee Gmail ayaa durba dhab u ah dadka nasiib wanaag qaarkood. Ma rabtaa inaad haysato? Waxaan ku tusin suurtagalnimada helitaanka.
Yahoo Mail Maahan mid ka mid ah barnaamijyada boosta ee la doorbido, laakiin wali waxay ilaalinaysaa karti iyo karti weyn. Dabcan, waxay ku soo bandhigeysaa xayeysiinta taraafikada, sidaa darteed waxay luminaysaa xoogaa dan ah; Ku guuleysiga iyada oo looga mahadcelinayo casriyeynta ugu dambeysay: dib-u-habeynta interface waa mid cajiib ah, waan hubinay.
Yahoo Mail waxay oggol tahay in lagala xisaabtamo xisaabaadka Yahoo ilaa xisaabaadka Gmail, Muuqaalka ama AOL
Mid ka mid ah faa’iidooyinka Yahoo Mail ayaa ah in ay oggolaato adeegsiga akoonno kala duwan marka laga reebo adeegga laftiisa. Qaabkaan, dhinacba waad kula tartami kartaa Gmail maadaama ay sidoo kale maamusho koontada Google; iyagoo bixinaya iswaafajin leh Drive iyo Dropbox. Dheeraad ah, Yahoo waxay siisaa 1 GB oo boos ah adeegsadayaasha, faahfaahin tafaasiil dheeri ah.
Yahoo Mail ayaa la cusbooneysiiyay fududeeyo adeegsiga hal gacan. Sidan, shirkaddu waxay awood u yeelatay liistada soosaarista hoose iyadoo bixineysa marin u hel toos ah sanduuqa, emayllada muuqda, lifaaqyada iyo rukhsadaha. Sidan, marin u helidda waxyaabaha ugu waaweeyn ayaa la dardar galiyay iyada oo app-ku uu sii hayo dhamaan baalasheeda oo lagu daro xakameyn. Dheeraad ah, is-hagaajinta ayaa fure u ah.
Nooca cusub, Yahoo Mail ku soo bandhig mawduucyo kala duwan oo leh dhawaaqyo midab leh si qof walbaa u habeeyo saxaaradda sida ay jecel yihiin. Oo ha iloobin Rabbiga hab mugdi ah: Yahoo Mail ayaa ku biirtay isbeddellada, iyada oo markaa kor u qaadaysa aragtida, gaar ahaan marka ay habeenkii dhacdo.
In kasta oo dalabka iyo isticmaalkiisu ay bilaash yihiin, Yahoo Mail waxay ku xayeysiisaa xayeysiinta macaamiisha boostada. Uma baahnid inaad leedahay koonto Yahoo ah si aad u isticmaasho oo aad rukhsad u leedahay iska ilaali xayeysiinta sanduuqa: o, 99 euro bishii ama 9.99 euro sanadkii; Iyada oo 7 maalmood oo tijaabo ah oo bilaash ah.
Barnaamijka cusub ee Yahoo Mail ayaa horay looga heli jiray Google Play Store: Waad cusbooneysiin kartaa dalabkaaga ama kala soo bixi kartaa xoqista horey loo cusbooneysiiyay. Haddii aad rabto inaad isticmaasho macmiil kale oo aan ahayn Gmail.
Yahoo Mail – Is abaabul! Nooca: Qoraaga: Waxaa loo baahan yahay GUDAHA GUDAHA INSTALL APK Cabbirka: